Nagu Saabsan - Madaxweynaha Kikkoman Zhenji Foods Co., Ltd.
Madaxweynaha Kikkoman Zhenji Foods Co., Ltd. waa soo saare xawaare caalami ah iyo xirfadle.
Waxaa si wada jir ah u maal galiyay oo aasaasey shirkadda Kikkoman Corporation iyo Uni-President Enterprises Corporation sanadkii 2008, iyada oo caasimada laga diiwaan galiyay 300 milyan oo shiine Yuan ah. Madaxweyne Kikkoman Zhenji wuxuu xaruntiisu yahay Shijiazhuang, oo ah magaalo madaxda Hebei Provence, soosaarka wuxuu ku saleysan yahay Zhaoxian, oo ah degmo caan ah oo taariikhi ah iyo dhaqameed. Shirkadda ayaa inta badan ka ganacsata ku dhawaad ​​100 nooc oo wax soo saar ah oo ka kooban 5 qaybood (tusaale ahaan, soy soodhada, geed isbonji la, maraqa qajaarka, khamri karinta iyo xilliyada kale), awooddeeda wax soo saar ee dhammaystiranna waa 100 kun oo tan.
Waxyaabahayaga waxaa si wanaagsan loogu iibiyaa suuqyada gudaha si loogu isticmaalo guriga, cunno u helida iyo warshadeynta, waxaa sidoo kale loo dhoofiyaa dalal badan ama gobolo sida Russia, Jarmalka, Malaysia, Australia, Turkey, Vietnam, iwm. taas oo ah sumadda soy caan ku ah adduunka, iyo sumadda Uni-President oo ah astaan ​​caan ka ah Taiwan iyo Shiinaha Mainland, iyo “Zhenji” oo ah astaanta noo-gaarka ah ee ， si ballaaran loogu aqoonsan yahay gudaha wershadaha xilliyadeed ee dalka Shiinaha.
Madaxweynaha Kikkoman Zhenji wuxuu helay shahaadooyin badan oo gudaha ah iyo kuwa caalamiga ah, oo ay ku jiraan ISO9001 (Nidaamka Maareynta Tayada), FSSC22000 (Nidaamka Maareynta Amniga Cuntada), ISO14001 (Nidaamka Maareynta Deegaanka), KOSHER (Cadeynta Cuntada Kosher), Shahaadada Dayactirka Aqoonsiga ee GMO ee SGS, HALAL (Xaqiijinta Cuntada HALAL Waxaa soo saaray Ururka Islaamka ee Shandong iyo MUI), iwm.
Falsafadeena maaraynta, tan ugu horreysa iyo ta ugu weyni waa “macmiil-u-yimaadda-hore”, oo soosaaridda alaabo tayo sare leh si nabadgelyo leh, oo gacan ka geysta bulshada maxalliga ah iyadoo shaqaalaha ka dhigaysa mid faraxsan.
Adoo mudnaanta koowaad siinaya tayada, shirkaddeena waxay nafteeda u huraysaa horumarinta farsamada ee wershadaha xilliyada, waxay adeegyo siisaa macaamiisha si qalbi furan, u fulisa mas'uuliyadeeda waxayna bulshada ku biirisaa sirdoonka.